PressReader - Ilanga: 2018-11-01 - Akazisoli ngokufunda isayensi
Akazisoli ngokufunda isayensi
Ilanga - 2018-11-01 - Imisebenzi - Tzondi@ilanganews.co.za
ISIKHATHI asichithe esebenza embonini yamatekisi usithatha njengesibalulekile empilweni yakhe uLotta Mayana ngoba ufunde lukhulu.
“Leya yindima ebaluleke kakhulu ngoba abantu bakhona bayayazi into abayifunayo, ngaphezu kwalokho inkulu indima abayidlalayo emnothweni wezwe, yize kuyindima ethathwa njengeyabangafundile,” kusho uLotta.
Kuyimanje uLotta uyiChief Air Quality Technician kwaSouth African Weather Service. Umsebenzi wakhe ukubheka ukuthi iziteshi ezihlola umoya ( air quality stations) ziluqoqa ngokuyikho yini ulwazi olusetshenziswa ukuhlola izinga lokugcoliseka komoya emkhathini. Kufanele benze isiqiniseko sokuthi umoya awungcolisekile ngokweqile. Uke wasebenza embonini yamatekisi ngesikhathi engawutholi umsebenzi awufundele. Uthi lesi bekuyisikhathi esinzima ngoba ubethi uma efaka izicelo somsenzi ezitolo kuthiwe ufunde kakhulu ( overqualified), ngesinye isikhathi uthi ubeze azisuse zonke iziqu anazo asale nomatikuletsheni kwiCV ezama ukuba athole umsebenzi. Ngemuva kokwehluleka kwakhe lapho wabe esengena embonini yamatekisi. ULotta ufunde eCape Peninsula University lapho ethole khona iNational Diploma in Analytical Chemistry, waqhubeka wenza iBachelor in Chemistry, wenza iBusiness Administration, wadlulela eHochschule Wismar, eGermany nokuyilapho ethweswe khona iziqu zeMasters in Business Information System. Uthi ngesikhathi esafunda e- high school akazange azikhethele izifundo zesayensi kodwa kwathi makuhlukaniswa waphoswa kulabo abenza izifundo zesayensi. “Kuthe uma sengifunda enyuvesi kwayima ngiqonda ukuthi imayelana nani futhi ngingasebenzela ziphi izinkampani,” echaza.
Ngo-2015 uthi uqale ukusebenzela iSouth African Weather Service njengeChief Technician. Uthi kwabafisa ukungena emkhakheni wakwasayensi kubalulekile ukuba baqinise kwiMaths nePhysics ngoba ikusiza ekubeni ungene kunoma yimuphi umnyango owufisayo.
ULotta uthi lo mkhakha akuwo akusiwo owabantu ababuthaka. Kumele uyazi into okhuluma ngayo futhi ngaso sonke isikhathi kumele uzame ukuzithuthukisa kwezemfundo ukuze kube yizinkampani ezithungatha wena.
ULOTTA Mayana uthi kudingeka uzinikele uma ufisa ukuba semkhakheni wezesayensi.